~ ဏီလင်းညို ~: နိဂုံးမဲ့တေးသွား
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 11:22 PM
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ၀တ္ထုလေးက။ ဒါပေမဲ့ နေသိပ်မကောင်းသေးတော့ သိပ်မရေးပါနဲ့ဦးလေ။ ခင်လို့ပြောတာနော်။ ကျန်းမာရေးကိုပဲ များများဂရုစိုက်ပါ။ နေမကောင်းဖြစ်တာ ရက်သိပ်ကြာရင်မကောင်းဘူး မဟုတ်လား။ အားရှိအောင်နေပါ။ စိတ်ပင်ပန်းရမဲ့အရာတွေ မတွေးနဲ့ပေါ့။
ကိုဏီးဗျာ.. စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူး.. ရေးထားတာတွေဖတ်ဖတ်ရင်း မျောမျောသွားတယ်..
ကိုဏီးးးးး........ ဘာဖြစ်လဲ နေမကောင်းဘူးလား။ ၀ထ္ထုတိုလေး လာဖတ်တယ်နော်။ လူမှုဘ၀တွေမှာ ဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့ သူတွေထဲမှာ ဒီလို အဖြစ်တွေ အများကြီးနေပါတယ်။ ကိုဏီးက နေသာမကောင်းတယ် ရေးထားတဲ့ ၀ထ္ထုလေးကတော့ တကယ်ကောင်းတာနော်။
နွယ် စာမရေးဖြစ်၊ အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်လုိ့ စိတ်ပူပြီး လာမေးရှာတဲ့ အကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မအားတာရယ် အခွင့်မသင့်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ ကိုဏီး ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ဦးနော်။
သွယ့်လို တစ်ယောက်လောက်ကို တမ်းတနေတယ်ဟုတ်
နေမကောင်းရင် တစ်ယောက်တည်းဆို သိပ်အထီးကျန်အားငယ်တာနော်..
အိမ်မှာ နားနားနေနေ နေတော့လဲ စာရေးဖြစ်တာပေါ့..
တစ်ခုခု အဖတ်တင်ပါတယ်လေ။ ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်ဦး..
ကဲကဲ အားမငယ်နဲ့... နေကောင်းအောင်ကြိုးစား
သွယ်လိုကောင်မလေးမျိုး ရှာကူပေးမယ်...း)
ကျန်းမာအောင်နေပါဗျာ ရေးဖော်တွေပို့စ်အသစ်မတက်ယင်ရင်ထဲတမျိုးပဲ အလုပ်များနေတာလားနေမကောင်းတာလားအမျိုးမျိုးတွေးမိတာဗျ
အဲ့လို အချစ် စာလေးတွေရေးချစ်တာ အချစ်မရှိတော့ ရေးလို့မတတ်ဘူးရယ် အစ်ကို ကိုယ်တွေ့တွေကော ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပါလဲဗျး) နေမကောင်းဖြစ်နေတာလား မသိဘူးကော ကျန်းမာပါစေ စာတွေများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ် ။
နေကောင်း ကျန်းမာ ပိုစ် တွေ အသစ်ရေးတင်နေတဲ့ ဏီဏီ ရဲ့ ရှယ်ပိုစ် လေးကို ရှယ်ဖတ်သွားပါတယ် ကျေးဇူးပါ
း)).. ပြုံးသွားတယ်အစ်ကို.. ဒီထဲက ဖြစ်စဉ်လေးက အပြင်မှာဖြစ်တတ်တာကြောင့်ပါ...း))... စိတ်ကောက်ပြေတိုင်းလည်း ချစ်သူကြိုက်တာကို သွားသွားဝယ်ပေးတတ်လို့..
၀တ္ထုတိုလေး ဖတ်လို့ကောင်းသားပဲ။ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုလေးပေါ့။ နေမကောင်းတုန်းက ရေးပေလို့သာ....။
အခုရော နေကောင်းပြီလား။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ မာန နဲ့
နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အားငယ်စိတ် ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဒေါသကို သဝန်တိုခြင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ တဒင်္ဂ ပေါက်ကွဲလိုက်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
စာကို ဆွဲခေါ်သွားအောင် ရေးတတ်တယ်ဗျာ ...
တကယ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဖတ်သွားတယ် ...
အခုလို အတွေးမျိုးနဲ့ စာတွေကို ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ အကို အမြန်ကျန်းမာပြီး သွယ်လို့ ဇနီးလေး ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ...
ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်က ဖြစ်စေချင်တာကို ပြောတာပါ ...
နောက်သွားတာ မဟုတ်ပါ .. တကယ့်ကို အတည်နဲ့ ပြောသွားတာပါ ...
မြန်မြန်နေကောင်းအောင်ဆုတောင်းပေးနေတယ်...ဒီ Post လေးရေးထားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်...
ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် တဝန်တိုတာ အထင်လွဲတာ သံသယဝင်တာတွေ ကင်းဝေးကြပါစေ..။
ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ အရာတွေပေါ့ ။
ရေးထားလိုက်တဲ့စာတွေ A4paper ၁၀ရွက်စာလောက်ရှိတယ်...
ကိုဏီး အရမ်းကောင်းတယ် ကျွန်တော် အရမ်းခံစားလိုက်ရတယ် . . ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲလိုဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ပဲအကို . . ချစ်သူ အနေနဲ့တောင် ကျွန်တော်သူ့ကို သ၀န်တိုခဲ့ဖူးတယ်အကို . . . ကျွန်တော်ကို အရမ်းချစ်မှန်းသိရက် တခြားတယောက်ကို စိတ်မ၀င်းစားဖူးဆိုတာ သိရက် ကျွန်တော် ဘာမှမဟုတ်ပဲ သ၀န်တိုခဲ့ဖူးတယ် အကိုး((( အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့လေးပါ အကိုး)
‌ရွှေအမြု‌တေက ‌ရွှေနှလုံးသား ကိုဖတ်လိုက်ရသလိုဘဲ၊အား‌ပေး‌နေမယ်
ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘောသဘာဝလေးက ပေါ်လွင်လှပါတယ်
ဒီလို တကယ်ရှိနေတဲ့ ဘဝတွေကို မြင်သာ ထင်သာအောင် ဖွဲ့ထားတာလေးလှတယ်
ကိုဇော်က တော့ပြောတယ်၊ ကိုဏီ ခမည်းလိုနေတာတဲ့ :)
အချိန်ရတုန်းရခိုက်..အားလုံးကို ပစ်ထားပြီး နားနားနေနေ..ရှိနေစေချင်ပါကြောင်း။
ကိုဏီးးးးး....ခုထိ နေမကောင်းဘူးလား???။ ဆေးရုံကတောင် ရက်ချိန်းစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ဖြစ်နေတာလားဟင်???။ ဒါနဲ့များ စာတွေရေး စာတွေလိုက်ဖတ်နေသေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါဦး။ :((
ငါ့အစ်ကိုဂျီး မြန်မြန်ပြန်လည်နေကောင်းကျန်းမာပါစေ။ နောက်တစ်ခါနေမကောင်းဖြစ်ရင် အနားမှာ ပြုစုပေးဖို့ ဒီဝတ္ထုတိုလေးထဲက ဇနီးလိမ္မာလေးဖြစ်တဲ့ သွယ့်လိုကောင်မလေးမျိုးနဲ့လည်း ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်....။
ရသကိုအပြည့်ခံစားလိုက်ရတယ်၊ ခွင့်လွတ်နားလည်တတ်ဘို့ အရေးကြီးပါတယ်
အတ္တကင်းပြီး လှပတဲ့ စာတစ်ပုဒ်တွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကိုဏီး နေမကောင်းလို့ သာပဲနော် ..ဒီလောက်ရေးနိုင်တာ..
ပထမအကြိမ် လာဖတ်ပြီးပြီ ဒါက ဒုတိယအကြိမ် လာဖတ်တာဗျ။
ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာလေးဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်းကို မသိနိုင်အောင် ကောင်းလှပါတယ်။ တကယ့် ဖြစ်ရပ် ကိုယ်တွေ့ ဇာတ်လမ်းများလား။
ကောင်လေးက သဘောထားသေးသလားလို့... ကောင်မလေးဘက်ကခံစားကြည့်တာပါ
မချစ်တတ်ရင် အချစ် ဆိုတာကြီးက ချစ်တဲ့သူကိုကော ချစ်ခံရတဲ့သူကိုပါ ပူလောင်စေတယ်နော်... ကြောက်ဖို့ သိပ်ကောင်းတယ် ။
ပုံလေးလဲ လှတယ် ကိုလင်းညို ။ ညီမလေးတော့ သဘောကျတယ် သုံးထားတဲ့ အရောင်တွေကိုလဲ ကြိုက်တယ် ။
ဒါနဲ့ နေမကောင်းနေရင် နားနားနေနေ နေပါ ကိုလင်းညို ...သိပ်အပင်အပန်းမခံပါနဲ့လေ ။
နှစ်ယောက် တစ်အိမ်မက်ရယ်၊ မိုးရေထဲ မှာ ချစ်သူအတွက်
ဝက်ခေါင်းသုပ် ကလေးတွေ ယယ်လာတာရယ် ဖတ်ပြီး
ဘယ်လိုတေးသွားမျိုး မဆို အဆုံး မရှိစေချင်ဘူး..
ကာရံညီတဲ့ တေးသွားလေးတွေဘဲ ဖြစ်စေချင်မိတယ်..
ဇာတ်လမ်းလေး လာဖတ်တယ် အစ်ကို ဏီရေ.။ အစဉ်အားပေးလျှက်ပါဗျာ